AHRN Kachin Project sites and Covid-19 Donation – AHRN-Myanmar
AHRN Kachin Project sites and Covid-19 Donation
By AHRN IT — In Activities	— 13/04/2020
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ AHRN စီမံကိန်းဌာနများဖြစ်သည့် (၀ိုင်းမော်၊ ဗန်းမော်၊ ဖားကန်.၊ လုံးခင်း၊ ဆိုင်းတောင်၊ ‌‌ဝှေခါ၊ တာမခန်) တို့သည့် Covid-19 (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် ၀ိုင်းမော်၊ ဗန်းမော်၊ ဖားကန်.၊ လုံးခင်း၊ ဆိုင်းတောင်၊ ‌ဝှေခါ၊ တာမခန် တို့တွင်ရှိသော တိုက်နယ်ဆရာဝန်၊ မြို့နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး အသီးသီးအား လှူဒါန်း ခဲ့ကြသည်ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။ Sharing is Caring!!
AHRN project sites in Kachin State (Waimaw, Bamaw, Hpakant, Lone Khin, Seng Taung, Waikha, Tarmakhan) supported withagenerous donation the respective Station Medical Officer, Township Medical Officer, District Medical Officer in their areas in their fight against Covid-19. Sharing is Caring!!
By AHRN-Bamaw Team
By AHRN Seng Taung Team
By AHRN-Lone Khin Team
By AHRN Tarmakhan Team
By AHRN Hpakant Team